अघोषित क्रान्ति : एक स्पष्टोक्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
अघोषित क्रान्ति : एक स्पष्टोक्ति
व्यक्तिविशेषको खुबी र क्षमतालाई उपेक्षा गर्दै जन्मका आधारमा उच–नीचको व्यवहार गरिने, यो जात र त्यो वर्ण भनेर वर्गीकरण गर्दै त्यसैका आधारमा मानवप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिने समाज उँभो लाग्छ भनी अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।
असार ९, २०७७ प्रभा कैनी
नवराज विक र साथीहरूको नृशंस हत्या अनि लगभग त्यही समयमा गोरा अमेरिकी प्रहरीको ज्यादतीबाट मृत्युवरण गरेका अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको मृत्युले नेपाली र अमेरिकी दुवै समाज उधुम उचालिएका छन् । एकातिर ‘ब्याक लाइफ म्याटर्स’ लेखिएका र अर्कातिर ‘दलित लाइफ म्याटर्स’ लेखिएका पोस्टरले व्यापकता पाएका छन् ।
‘साइलेन्स इज भ्वाइलेन्स’, ‘नो जस्टिस नो पिस’ जस्ता साझा स्लोगनमार्फत अमेरिकी काला र नेपालका दलितको समस्या उनीहरूको मात्र सोचियो भन्ने आरोप लाग्दै छ, इतर जात र रङका मानिसहरूलाई । सँगसँगै यस्ता दुव्र्यवहारको निन्दा र विरोध गर्नेहरूलाई पनि अर्को तरिकाले दोष लगाइँदै छ । अरू बेला चुप बस्ने र घटना भएका बेला दलितप्रति सहानुभूति दर्साउनेहरूलाई बोक्रे परिवर्तनको खोल ओढ्ने पाखण्डीका रूपमा आरोपित गरिँदै छ । कतिसम्म भने, हरेक दलितसँग क्षमा माग्न सबैलाई बाध्य पार्ने जस्ता आक्रोशजन्य अभिव्यक्ति पनि देखिँदै छन् । विशेष गरी गैरदलितलाई ‘उठी सुख न बसी सुख’ को अवस्था आइपरेको छ । नबोल्ने हो भने दलितप्रति न्याय नगरेको र हिंसालाई प्रश्रय दिएको ठहर्ने, बोले पनि कतै पाखण्डीको बिल्ला भिराइने त होइन भन्ने आशंका छ ।
निश्चय नै, दलितप्रतिको छुवाछूत, विभेद र चरम अत्याचारको शृंखला हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । तर, म हिंसालाई प्रश्रय दिने व्यक्ति होइन, न त यस मामिलामा दलितसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने नै ठान्छु । आफूले जानेबुझेसम्म म दलितहरूको अहंमा चोट पुर्‍याइन्छ कि भन्नेमा सधैं सतर्क छु, छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहार र अन्यान्यविरुद्ध आवाज उठाउँदै र आफूले सकेसम्म व्यवहारमा उतार्दै आइरहेकी छु भन्ने यथार्थ आज समय र सन्दर्भले बृहत् रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता मेरा सामु आइपरेको महसुस गरेकी छु ।
२०३०–३१ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ । एक साँझ एक युवक गोप्य चिठी लिएर हाम्रो घर आइपुगे । पञ्चायती शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको भूमिगत आन्दोलनको कुनै कार्यक्रमसम्बन्धी चिठी रहेछ । त्यो दिएपछि ती युवक आफन्तकहाँ जाने तरखरमा लागे । हामीले खाना खान अनुरोध गर्दा उनी असमञ्जसमा परे, कारण थाहा भएन । साँझको पाहुना, त्यसमाथि पनि चिठी लिएर आएको व्यक्तिलाई अन्यत्र जान दिन हाम्रो नैतिकताले दिएन, यो हाम्रो संस्कारविरुद्धको पनि कुरा थियो । त्यसैले उनलाई कर गरेरै हाम्रै घरमा राख्यौं । मैले भुइँमा दुई–तीन जना बस्न मिल्ने लामो गुन्द्री ओछ्याएर खाना खान आउन अनुरोध गरें । उनी उस्तै असजिलो महसुस गरिरहेका थिए । मेरा जीवनसाथी अमरराज कैनी गुन्द्रीमा बसे र उनले पनि युवकलाई बस्न अनुरोध गरे । दुवैलाई खाना मैले राखिदिएँ । तर उनी त अझै आएनन् र बिस्तारै हिचकिचाउँदै भने, ‘हजुर, म त कामी हुँ ।’
बिनाहिचकिचाहट अमरजीले ‘केही हुँदैन, बस्नोस्’ भन्दै उनको हातै समाएर आफ्नो बगलमा राखे । अलमलमा परेका आगन्तुक छक्क परे । उनको अनुहारमा प्रसन्नताको लहर छाएको स्पष्टै देखियो । उनले भने, ‘अरूकहाँ यसरी कहाँ बस्न पाइन्छ र, हजुर ? हामीलाई त खाना बाहिरै दिन्छन् । खाना खाएका भाँडा आफैं माझेर बाहिरै सुकाउनुपर्छ ।’ अमरजीले भने, ‘हो, समाजको त्यो व्यवहार तपाईंलाई जति हामीलाई पनि थाहा छ, तर हाम्रा घरमा कसको के जात भन्ने कुराले फरक पार्दैन ।’ ती युवकले अन्यत्र बेहोरेका अपमानका धेरै कथा सुनाए अनि हाम्रो व्यवहारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरे ।
ससाना छोराछोरी हुर्किरहेका र आफू बाहिर काम गरिरहेकी हुँदा मलाई घरधन्दाका लागि कोही न कोही सहयोगी चाहिन्थ्यो । कहिले केटा, कहिले केटी भेटिन्थे । कहिले बाहुन–क्षत्री त कहिले दराई, मगर, तमाङ आइपुग्थे । एकपटक पैंतीस वर्षजतिकी लाग्ने, लोग्नेबाट परित्यक्त महिला आइपुगिन् ।उनी हाम्रा घरमा आइपुग्नुभन्दा पहिले जहाँ काम गर्थिन्, त्यहाँबाट उनको जात थाहा भएपछि लखेटिएकी रहिछन् । हामीले जात नसोधी हाम्रा घरमा रहँदा आफूले दिन सक्ने तलब र सुविधा बतायौं अनि उनले गर्नुपर्ने कामको कुरा गर्‍यौं । लुगा धुने, बढार्ने, पुछ्ने, भाँडा माझ्ने सबै काम गर्न उनी राजी भइन्, तर खाना पकाउन इन्कार गरिन् । मैले खाना आफैं पकाउने सर्तमा उनलाई घरमा राखें ।
बस्न सुरु गरेका दिनदेखि नै भाँडा लिन भान्सामा जान हिचकिचाउने र अरूसँग छोइन नखोज्ने उनको बानी देखेर मलाई शंका लाग्यो । अनि म उनको जात सोध्न बाध्य भएँ । उनले डराईडराई भनिन्, ‘म त मिजार (सार्की) की छोरी, हजुर ! पहिला हजुरले सोधिबक्सेन, मेरो पनि जाने ठाम थिएन, आफ्नो जात भन्यो भने हजुरले काम दिनुहुन्न होला भन्ने सोचेर नभनेकी । भूल भयो, माफ पाम् !’ पहिलापहिला बसेका घरमा भोगेको व्यवहारले मसँग उनले जात लुकाएकी र खाना नबनाउने सर्त राखेकी रहिछन् । त्यो सुनेपछि मैले उनलाई खाना पकाउने कामसमेत सुम्पिएँ । ‘कुक’ मा प्रमोसन गरें र उनको जातको कुराले आफ्ना घरमा कुनै असर नपर्ने बताएँ । उनलाई बोझ थपिएको थियो, तैपनि बडो प्रसन्न मुद्रामा काम गर्न थालिन् । हामी दुई थरीको सम्झौता निकै उचित लागेको थियो तर उनी धेरै दिन बसिनन् । ‘बा–आमाले अर्को केटा खोजिदिए रे, सधैं अर्काको घर बसेर भएन, आफ्नो पनि भविष्य हेर्नुपर्‍यो’ भन्दै उनी बिदा भइन् ।
केवल पाँच–सात वर्षअघिको दसैंको कुरा हो । ‘दोबाटेकी आमासँग टीका थापेर आशीर्वाद लिम् है यसपटक ।’ अमरजीको प्रस्ताव आयो मलाई । सासू–ससुरा, जेठाजु– जेठानी गुमाइसकेका थियौं । घरमा मान्यजन नभएको अवस्थामा मैले पनि नकार्ने कुरै थिएन । आमासँग टीका लगाइमाग्न आउने हाम्रो प्रस्तावले दोबाटे, जो अहिले गण्डकी प्रदेशका सांसद हुनुहुन्छ, समेत पूरै परिवार आश्चर्यमा परेको हामीले अनुभूति गर्‍यौं । टीकाका दिन उहाँकी आमासँग हामीले टीका थाप्यौं । उहाँले आशीर्वाद दिनुभो । खाना खाएर हामी घर फर्कियौं ।
भोलिपल्टदेखि हाम्रो चर्चा हुन थाल्यो । साथीसंगी, वृद्ध, युवा जोसँग भेट हुन भयो, सबैले प्रश्न गर्न थाले । सबै जना छक्क पर्न थाले । कसैले यति लामो जिब्रो निकालेर सोधे, ‘साँच्चै हो र ?’ हाम्रो कुरा पत्याउन मात्रै पनि गाह्रो भयो उनीहरूलाई । कसैले ‘बिचरी कमिनी बूढीले के आसिक दिइन् होउ तपाईंहरूलाई ?’ भन्दै विश्वकर्मा आमालाई होच्याए, कसैले ‘हरे शिव ! राम राम ! के सुन्नुपरेको हो यो’ भन्दै हाम्रो कदमलाई उल्का साबित गर्ने हिसाबले पुर्पुरोमा हात राखे । के कांग्रेस के कम्युनिस्ट, के शिक्षित के अशिक्षित, जागिरे, व्यापारी, धनी–गरिब सबैको एकै प्रकारको उद्गार । हामीलाई केके न नमुनायोग्य काम गर्ने हिम्मत गरेझैं लागेको थियो, हाम्रो कामको समर्थनसम्म त होला भन्ने महसुस गरेका थियौं, तर जजससलाई यो कुरा सुनायौं, ती कोही पनि हाम्रो पहलबाट उत्साहित भएनन् । अधिकांश त हाम्रो टीका सामाजिक स्थिरता भाँड्ने अर्घेल्याइँ साबित गर्न उद्यत होलान् जस्तो भयो । थोरैले चाहिँ हाम्रो अघोषित क्रान्ति ठीकै माने पनि आफूले चाहिँ अझै आँट्न नसक्ने कुरा स्विकारे ।
यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् तर अहिलेलाई यति नै पर्याप्त ठान्छु । हुटिट्याउँले खस्न लागेको आकाश मैले नै धानेको हुँ भनेर धाक लगाएझैं आफ्ना कदमको प्रशंसा आफैं गर्न खोजिएको होइन । तर, दलित समस्याका लागि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तहमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, तापनि दलितउपर हुँदै आएका अनेकौं अपमान र असहिष्णुतालाई घटाउन यस्तै हरेकका एक–एक पहलले केही न केही सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्नचाहिँ हिचकिचाउनुपर्दैन ।
छुवाछूतविरुद्धको कानुनले मान्यता पाएको पाँच दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । दलित उत्थानका पक्षमा अनगिन्ती कानुन पास भएका छन्, सयौं नीतिनियम बनेका छन् । हरेक राजनीतिक पार्टीका अभियान र चुनावी घोषणापत्रमा दलित उत्थानको सवाल प्राथमिकतामा पनि परेकै छन् । दलित उत्थानका लागि भनेर शैक्षिक छात्रवृत्ति छुट्याइएकै छन्, राजनीतिक आरक्षणरूपी सुविधाको पसारो पनि तहगत रूपमा छँदै छ । यी सबै व्यवस्था र सुविधाबाहेक दलितहरूले प्राप्त नगरेको कुरा के हो त जसले गर्दा उनीहरू तथाकथित उपल्लो जातका मानिसजस्तो हैसियतमा जम्न र रम्न पाएनन् ?
दलितले तथाकथित उपल्ला जातहरूबाट पाउन नसकेको कुरा हो— समभाव । न्यूनतम मानवीय समव्यवहार हो । जब दुई थरीका बीचमा समभावको व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ कानुनी प्रावधानको पनि उति खाँचो पर्दैन । समस्या कहाँ देखियो भने, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उच्च भनाउँदाहरूबाट दलितहरूप्रति दिलैदेखि सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रयत्न नै भएन । केही अपवादबाहेक हाम्रो समाजमा कानुनले दिएको बाध्यतालाई पनि कहिले उपेक्षा र उल्लंघन गर्दै त कहिले त्यसबाट लुक्दै र बच्दै आफू ठूलो र अर्को सानो भन्ने व्यवहार भइरहे । फलत: सबै प्रयास ‘मेकानिकल मिन्स’ जस्ता साबित भए । दलितसँगको अन्तरघुलनको ‘केमेस्ट्री’ बुझ्ने प्रयत्न र प्रयास हुँदै भएन, न राजनीतिक प्रशिक्षणमा न सामाजिक कार्यक्रममा न त सांस्कृतिक रीतिरिवाज, व्यवहार र मूल्यमान्यतामै । नीतिनियमलाई व्यवहारमा उतार्ने मानिसकै नियत खोटो भएपछि संविधानका धारा र अनगिन्ती बुँदागत कानुन पाखा लाग्छन् भन्ने उदाहरण हरेक दलितले बेहोरिरहेका अन्यायपूर्ण व्यवहार नै हुन् ।
व्यक्तिविशेषको खुबी, क्षमता र सच्चरित्रतालाई उपेक्षा गर्दै जन्मका आधारमा उच–नीचको व्यवहार गरिने, यो जात र त्यो वर्ण भनेर वर्गीकरण गर्दै त्यसैका आधारमा मानवप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिने समाज उँभो लाग्छ भनी अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ । आआफ्ना ठाउँबाट विभेदविरुद्ध सानै भए पनि पहल गरिरहे समाजको रूपान्तरण सम्भव चाहिँ छ । प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०९:५६